Xuseen: Madaxweyne noo ogoloow inaan kula soo galno gidaarada iyo carra-tuurada aad sameysatay – Kalfadhi
Xuseen: Madaxweyne noo ogoloow inaan kula soo galno gidaarada iyo carra-tuurada aad sameysatay
Mudane Madaxweyne, haddii aad isku wareejisay gidaar, carro-tuuro, askari jiifa iyo mid taagan, annaga yaa noo maqan? Carruurtii caseeyaasha ahaa iyo gabdhihii nolasha ka raadinayay shaaha ee shalay ku dhintay qaraxa, iyaga iyo kuwa la midka ah yaa u maqan?
Kuwa xubnaha beelay, kuwa xanuunka la taahaya ee isbitaalada yaala yaa u maqan? Hooyada asayda saaran, aabaha gablamay, carruurta agoontoowday yaa u maqan?
Madaxweyne, maalintii lagu doortay waxaan mooday, maalintii ugu dambeysay ee aan maqlo qarax, dil, dhaawac, saboolnimo iyo guul darro.
Habeenkii lagu doortay socod, farxad iyo rajo ayuu waagu iigu baryay, laakiin illaa hadda waan yaabanahay waxa is baddalay. Ma adigaa been noo sheegay? Ma dhib baa ku haysta? Mana ilaawday mise waa noo maqan tahay? Haddii aad noo maqan tahay, ilaa goormee ku sugnaa; laba sano waa dhamaatee?
Madaxweyne, Farxiyo Ibraahin oo ka mid ahayd dadkii doraad qaraxa ku dhintay waxay geeriyootay iyadoo dhahaysa “i badbaadiya, i badbaadiya”. Waxay ahayd hooyo masaakiin ah, oo shaah ka biisha carruurteeda; xaaaladdu way adkeyd; rasaas ayaa socotay loomana tagi karin. Annaga, ma sidaas ayaa noo dambeysa?
Mudane, noo ogoloow inaan kula soo galno gidaarada iyo carra-tuurada aad sameysatay, waayo waxaa noo sheegtay in annaga oo dhan aan nala deyneen. Madaxweyne maxaa noo heysaa? Fursad waan ku siinay, mucaaradkaagana waan la dagaalnay, canshuurta waan bixinay ee madaxweyne ma na ilaawday? Madaxweyne, ku aaway?
Qore: Xuseen A. Maxamed
Isimada oo Soo Xulista Wakiillada kala shaqeyn doona Guddiga Ansixinta Wakiillada Puntland